नेपाली माटोमा सुन फलाउने किसानका कथा (भिडियोसहित) — Motivatenews.Com
काठमाडौं – आज हामी नेपाली माटोमा सुन फलाउने एउटा किसानको कथा प्रस्तुत गर्दैछौं । लाखौं नेपाली युवाहरु घर व्यवहार चलाउन ५० डिग्री तापक्रमको गर्मीमा पसिना चुहाउन बाध्य छन् । विदेश जानु धेरैको बाध्यता भएपनि कतिपय सिप सिक्नका लागि भएपनि विदेशिने गरेका छन् । विदेशमा सिकेको सिपले नेपाल आएर सदुपयोग गर्दै नेपाली माटोमा सुन फलाउने युवा हुने म्याग्दीका सन्तोश बोगटी ।
‘विदेश पैसा कमाउन मात्र होइन, केही कुरा सिक्न, जान्न र देख्न पनि जाने हो’ भन्ने कुराको उदाहारण बनेका छन् बोगटी । उनी विदेश गएर पैसा त कमाउन सकेनन् तर राम्रो सिप ल्याएर फर्किए । त्यही सिपले अहिले उनलाई करोडौं सम्पतीको मालिक बनाएको छ ।
काठमाडौं दहचोकमा रहेको ‘बोगटी एग्रो फार्मका’ सञ्चालक बोगटी लामो संघर्ष, धोका र परिश्रमले यहाँसम्म पुगेका हुन् । पैसा कमाउनका लागि भनेर मलेसियाको एक सुपर मार्केटको सेल्स म्यानमा जागिर खान गएका थिए उनी । केही महिना उनले सुपर मार्केटमा काम गरेपनि उनलाई त्यो चित्त बुझेन र अर्को विकल्प खोजे । त्यो कम्पनीका तलब भत्ताको सुविधा भएपनि उनलाई सिप सिक्नु थियो । उनले तलबलाई मात्र हेरेनन्, नेपाल गएपछि के गर्ने भनेर सोचे । नेपालमा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो कृषि । कृषि व्यवसायका लागि मलेसिया अग्रणी मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । त्यही सुपर मार्केटको साहुसँग उनले हार गुहार गरेर आफूलाई कृषिमा लगाइ दिन आग्रह गरे । अनुनय विनय गरेपछि सुपर मार्केटको साहुले आफ्नै चिनजानको कृषि फार्ममा जागिर लगाइ दिए । त्यसपछि सुरु भयो उनको कृषिकर्म ।
उनले त्यहाँ यति दुःख गरे कि त्यो दुःखलाई उनले दुःखका रुपमा लिएनन् । बिहान उठेर कुखुराको सुली बोक्दा होस् या साठी सत्तरी किलोको मल उकालो बाटोमा बोक्दा किन नहोस् उनलाई आनन्दै आनन्द आउँथ्यो । राति बाह« बजेसम्म कोदालो खन्दा होस् या चिसो मौसममा पानी लगाउँदा किन नहोस् हरेक कामबाट उनले मज्जा लिन थाले । किनकि उनलाई काम सिक्नु थियो र थियो नेपालमा आफूजस्तै दर्जनौँ युवालाई रोजगारी दिन ।
तीन बर्षको कठिनपूर्ण संघर्षलाई थाती राख्दै नेपाल फर्किए । नेपाल फर्कँदा उनले मलेसियाबाट ऋण तिर्ने पैसा बाहेक अरु ल्याएनन् । उनले सिप ल्याए, ज्ञान ल्याए तर पैसा ल्याएनन् । मलेसियामा उनले देखेकोे एग्रो टुरिजमको कल्पना गर्दै नेपाल आएका उनल काठमाडौंको नैकापमा कृषि फार्मको सुरुवात गरे ।
उनले ल्याएका विभिन्न प्रविधिले गर्दा त्यो क्षेत्रका किसानहरु अचम्ममा पर्थे । किसान मात्र हैन अन्य पेसा व्यवसायका मानिसहरु पनि अचम्मित हुन्थे । विदेशमा देखेको र प्रयोग गरेको प्रविधि नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्न उनलाई खासै समस्या थिएन तर भन्सारमा हुने विभिन्न किसिमका झन्झटले गर्दा उनलाई समस्यामा पार्यो । जति समस्या भएपनि उनले नेपालमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेरै छाडे ।
नैकापका स्थानीयले उनको काम गराई र खटाई देखेर उनलाई कालो चाइनीज भनेर उपनामसमेत् दिएका थिए । सुरुवाती दिनहरुमा तीन चार लाखमा सञ्चालन गरेको त्यो एग्रो फार्मले राम्रो आम्दानी गर्दै गयो । कृषि पेसामा पहिला खर्च गर्नु पर्छ र त्यसको केही महिनापछि मात्र प्रतिफल आउँछ । केही किसानहरु आजको आजै प्रतिफल खोज्छन् र असफल हुन्छन् । उनले नैकापमा केही बर्ष फार्म चलाए । छिटो प्रतिफल खोज्ने पार्टनरका कारण उनले त्यो फर्मबाट बिदा लिए र दहचोकमा सञ्चालन गरे ‘बोगटी एग्रो फार्म ।’
असी रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उनको फार्ममा विभिन्न किसिमका तरकारीहरु लगाइएका छन् । सिजन अनुसारको तरकारी उत्पादन गर्न उनी आफै काममा खटिन्छन् । २० जनालाई रोजगारी दिएका उनले केहीका परिवारलाई फार्ममा नै बस्ने व्यवस्था मिलाइ दिएका छन् ।
कृषि पर्यटनको अवधारणाका साथ अघि बढेका उनी केही समयमा नै एउटा रिसोर्ट सञ्चालन ल्याउँदै छन् । उनको सपना छ, घुम्न आउनेहरुलाई खान बस्नको व्यवस्थाका साथै घर पर्किंदा आफैँले बोटबाट तरकारी टिपेर लैजाने व्यवस्था सहितको सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट बनाउने । रिसोर्टका लागि उनले ठाउँ पनि लिइ सकेका छन् ।
नेपालीहरुमा सपना देख्ने बानीको विकास भैसकेको छैन । म को हुँ ? र किन जन्मेको हुँ ? भनेर बुझ्न नसक्दा धेरै नेपालीले दुख पाइ रहेका छन् । एकपटक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भनेका थिए ‘हजारौँ जुलियटहरु, हजारौं सेक्सपियर र हजारौं न्युटनहरु पहाडमा हलो जोत्दै होलान् ।’ उनले भनेजस्तै हामी आफूलाई चिन्दैनौं । विदेश गएरपनि आफ्नो स्पष्ट सपना भएकाले बोगटी नेपाल फर्किए र अहिले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । हामीले सुरुमै भने अनुसार नेपालकै माटोमा उनले सुन फलाइ रहेका छन् । तपाई पनि एउटा सपना बनाएर आफ्नो कर्ममा लाग्नुहोस्, सफलता अबस्य मिल्ने छ ।
२०७७ माघ २० गते प्रकाशित